Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee iska caabbinta biyaha ee Apple Watch | Wararka IPhone
Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee iska caabbinta biyaha ee Apple Watch
Wararka IPad | | Apple Watch, Noticias
Australia waxay kamid ahayd wadamada ugu horeeya ee adeegsadayaashu awood u yeesheen inay helaan Apple Watch kahor qofkasta, waqtiga oo kaladuwanaaday awgood. Laga soo bilaabo wadankaas waxyaabihii ugu horreeyay ee aaladda iyo natiijooyinka ugu horreeya ee baaritaannada ay ku ridayaan qalabka ayaa durba imanaya. Mid ka mid ah waa caabbinta biyaha ee caanka ah ee Apple Watch. Ragga jooga FoneFox, ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee tijaabiya caabbinta biyaha ee qalabka, labadaba qubeys iyo quusin barkadda.
Apple Watch waxay sidataa shahaado IPX 7 ah taas oo ka dhigaysa mid u adkaysata biyo biyo shubmaya iyo in la quusin karo ugu badnaan hal mitir muddo 30 daqiiqo ah, in kasta oo shirkaduhu badanaa yihiin kuwa aad u ilaaliya markaad dejineyso xadka biyuhu xireen sababo sharci awgood iyo in aaysan yeelan dhibaatooyin mustaqbalka sababo la xiriira ismaandhaaf ama fasiraad qaldan ee isticmaaleyaasha.
Los chios waxaa qoray FoneFox ku rid Apple Watch qubeys buuxa. Xubin ka mid ah kooxda ayaa qubeystay, oo ay ku jiraan saabuun ay ku jiraan aaladda gacantiisa si uu u hubiyo caabbinta biyaha ee caanka ah ee Tim Cook uu faallo ka bixiyay bilo kahor. Markii uu ka soo baxayay qubeyska, qalabku gabi ahaanba waa la qalajiyey isagoon muujin wax raad ah ama cillad ah hawlgalkiisa. Imtixaankii u horreeyay ayaa laga gudbay.
Imtixaanka labaad, waxay ku qooyeen Apple Watch baaldi biyo ah muddo shan daqiiqo ah. Dhamaadka waqtiga, waxaan u gudubnay inaan qalajinno aaladda oo aan hubino inay wali shaqeyneyso iyadoo aan wax dhibaato ah qabin.
Oo hadda imtixaanka ugu adag: ku isticmaal Apple Watch 15 daqiiqo barkadda. Waqtigaas, shaashadda taabashada wax jawaab ah kama bixin, sababo la xiriira teknolojiyadda qabashada ee ay isticmaasho, hase yeeshe, wixii ka shaqeeyay dhibaato la'aan waxay ahayd taajkii lagu dhaweynayay ama ka baxsanaa codsiyada. Markii uu ka soo baxay barkadda oo uu qalajiyey qalabka ka dib, Apple Watch ma muujin wax aan caadi ahayn oo ku saabsan hawlgalkeeda.
Shahaadada IPX 7, oo ay adeegsatay Apple Watch, kuguma talineyso inaad u isticmaasho qalabka barkadda barkad si joogto ah, laakiin way fiicantahay in la ogaado in haddii sababo jira awgeed aan illoobo, inagu yarayn doono xoogaa daqiiqado ah oo aan uga tagno barkadda oo aan u xafidno ammaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee iska caabbinta biyaha ee Apple Watch
3 Ogeysiisyo cusub oo Apple Watch ah oo loogu talagalay soo bandhigiddeeda
Tijaabinta Apple Watch ee biyaha hoostooda [fiidiyow]